Ubuhle kunye nokudideka kwimizobo yobisi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubisi kunye nabafazi bakhe abathandekayo abapeyintiweyo bekhangela isiphithiphithi kwaye oko kuyaqaqamba
UPang Maoukun Usizisile kwisitayile somfazi ofuna ukulula kwaye ekuthobekeni kwinkangeleko into yokuchaza ngokwakhe kwaye ichaza inxenye yesitayile sakhe. SajediEndaweni yoko, kusisa phambi komntu wasemzini kwaye siphantse siphume kweli bhinqa lomhlaba apho ukujonga kugqobhoza eludongeni endaweni yalowo ujongileyo.
Siya kumfazi wesithathu ukusuka eyona mbono iphithizelayo kunye ne-surreal NguSoey Milk. Ukucoceka okuncinci kunye nokuqaqamba ngakumbi ngemifanekiso eqaqambileyo, nangona ikwalathiselwe ekubanjweni nasekufotweni. Ukujongwa okwahlukileyo kwizimo ezahlukeneyo kunye nemiboniso enokunika zonke iintlobo zemidlalo.
Enye ye amanqaku eziqhelekileyo imisebenzi yakhe - ubuhle yomfazi esinokuyifumana kwisiqwenga ngasinye. Ubuhle obahlukileyo ngokuchasene neepateni kunye nemibala ethi izame ukudlala ngezinye izivamvo kwaye igqityiwe. Ubisi apha luyakwazi ukufumana ibhalansi engaqhelekanga apho azama ukuzisa ubunyani bobuchwephesha kunye nokuzithemba kwenye indawo.
Iipeyinti zabo tsala umdla Kwaye babonisa isidanga esikhulu setalente yokuxuba imibala apho imodeli ibonakala njengeyona nto iphambili kulowo nalowo msebenzi. Imisebenzi yobisi ijolise kwifom yabasetyhini, ibalaselisa iirves kunye nesitayile esinokongezwa kuyo inxenye ye-eroticism, kwaye ngelixa iinkcukacha zakhe zichanekile kulwakhiwo, ziyaphetshwa ngokuthe ngqo xa umntu egxila kuyo yonke into ejikeleze bona.
Nge ukubamba okungafunekiyo kunye nokuthambaKukwakho nokubanda kobo buhle phantse bugqibeleleyo obunokunika umbono wento engenanto kunye noko sinokudlula kuko.
Unayo facebook wakho y ibhlog yakhe ukuze akwazi ukulandela umsebenzi wakhe ngokusondeleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubisi kunye nabafazi bakhe abathandekayo abapeyintiweyo bekhangela isiphithiphithi kwaye oko kuyaqaqamba
Imbeko kwiNkosana, igcisa elikhulu elinetalente eliguqule iinwele zalo izihlandlo ezingama-36 ukusuka ngo-1978 ukuya kowe-2013
Ukuhambisa ikomityi yekofu ngendlela enobugcisa